जंगली बिरालो घाटी | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! जंगली बिरालो घाटी | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
जंगली बिरालो घाटी एक5रील अनलाइन स्लट वास्तविक पैसा जीत संग खेल 25 तपाईं प्रति आफ्नो आवश्यकता रूपमा समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ कि paylines. विषय स्पष्ट नीलो आकाश र सार्दा बादल अन्तर्गत वीरान घाटी यसको शिकार शिकार तयार एक जंगली बिरालो आधारित छ. यो मा निर्मल वातावरण मोबाइल स्लट vultures तपाईं खेल आदी गर्ने बतास चिल्ला र उड्ने को ध्वनि एक सूथिंग प्रभाव प्रदान गर्दछ. को स्लट स्पिन गर्दा एउटा स्पेनिश गिटार संगीत प्ले छ. यो सट्टेबाजी रकम संग रूपमा कम रूपमा एकल payline र सबै प्रति स्पिन £ 250 को एक अधिकतम लागि £ 0.01 सुरु 25 paylines.
जंगली बिरालो घाटी विकासकर्ता बारेमा:
यो अनलाइन स्लट वास्तविक पैसा जीत खेल NextGen विकास भएको थियो, यसको क्रेडिट गर्न स्लट र क्यासिनो खेल को एक विस्तृत विविधता भएको नवीन अनलाइन गेमिङ समाधान प्रदायक. तिनीहरूले एक लाखौं हृदय जित्यो छ कि सबै भन्दा रचनात्मक र कल्पनाशील विषयवस्तुहरू केही खेल विकास गरेका.
यस अनलाइन स्लट वास्तविक पैसा जीत खेल चार शीर्ष मूल्य आधार प्रतीक छन् र तिनीहरूले गिद्घ छन्, आधा सडक धावक र आधा बाख्रा जस्तै देखिन्छ कि एउटा पशु, कैक्टस र क्यालिफोर्नियाली सर्प. को गिद्घ को उच्चतम खम्बा दिन्छिन् 500 पटक ती पाँच बीचमा पङ्क्ति मार्फत भूमि गर्दा. एक को खेल कार्ड प्रतीक, K, Q, जे, 10 &9मा एके संग कम प्रतीक तिर्ने छन् 250, मा QJ 150 र 9-10 संग 100 पटक खम्बा. खेलको बोनस प्रतीक यसको पन्जा मुद्रण साथ जंगली बिरालो नै हो.
जंगली विशेषता: यो मा जंगली प्रतीक मोबाइल स्लट खेल Wildcat प्रतिनिधित्व छ र यो मात्र 2nd देखिन्छ & 4th रील. यसलाई थप विजेता संयोजन लागि आफ्नो संभावना बढाउन सक्छ यसैले खेल मा सबै प्रतीक लागि समेट्छ र. यसलाई गर्दैन, तर, खेलको स्क्याटर सुविधाको लागि कवर.
फ्री Spins छरिनु: को पन्जा मुद्रण यस को स्क्याटर सुविधा छ अनलाइन स्लट वास्तविक पैसा जीत खेल र तीन वा थप प्रतीक प्रदर्शनमा तपाईंलाई नि: शुल्क खेल ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँ तपाईं बीच निःशुल्क spins संख्या चयन गर्न प्राप्त 5, 10 & 15.5spins प्रस्ताव 10 पटक WINS मा गुणक, 10 संग spins3समय र 15 संग spins3पटक.
सारांश: विभिन्न प्रभावशाली बोनस सुविधा र multipliers संग, तपाईं सजिलै यो मा दिन को अन्त द्वारा विशाल पैसा जीत आशा गर्न सक्छौं अनलाइन स्लट वास्तविक पैसा जीत खेल.
यो सर्प Charmer
बार बार काला भेडा5रील
साइबेरियन तूफान दोहोरो प्ले